ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ပြည်သူ ၁၅ဝ ခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်၊ ကုန်ဈေးနှုန်?? - Yangon Media Group
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ပြည်သူ ၁၅ဝ ခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်၊ ကုန်ဈေးနှုန်??
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သူ သာထက်(ခ) နိုင်သူလတ်က ”အရင်ကထက်ပိုဆိုးလာတဲ့ ခုလိုအချိန်အခါမှာ ပြည်သူက အံကြိတ်ခံရမှာလား။ ဒါကြောင့်စီ မံမှုညံ့တဲ့ခပ်ညံ့ညံ့အစိုးရ မဖြစ် စေဖို့ လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရအောင် စီ မံပေးပါ။ ၁ဝမိနစ်လောက်လာပြီး ပြန်ပျက်လိုက်နဲ့ ပြည်သူကိုကိုယ် ချင်းမစာ ဒုက္ခပေး အရူးမလုပ်ပါနဲ့။ ကျန်းမာရေးဆိုရင်လည်း မြို့ နယ်ဆေးရုံလုပ်ပြီး ထိပ်ပေါက် ခေါင်းပေါက် ထိခိုက်မှုလောက် သာကုပေးပြီး ကျန်တဲ့ရောဂါတွေကို တစ်ခြားဆေးရုံတွေကို လွှဲနေ ရင် ဆေးရုံလို့မပြောနဲ့။ ဆေးခန်း သာအမည်တပ်လိုက်။ အဓိကက တော့ လျှပ်စစ်မီးပါပဲ။ လျှပ်စစ်မီး ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပြီးပေး သင့်ပါတယ်။ ပေးချင်တဲ့အချိန် ပေးချင်သလို ပေးနေတာမျိုးမဖြစ် စေချင်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့လိုအပ်ချက် တွေလည်း တောင်းဆိုထားပါ တယ်။ အခုလိုပြည်သူ့အသံတွေ ကိုနားထောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတာ ဝန်ရှိသူတွေက လုပ်ဆောင်ပေးစေ ချင်တယ်” ဟု ¤င်းကဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၁၉ ရက်က ပြော သည်။
ဆန္ဒပြရာလမ်းတစ်လျှောက် တွင် ပါဝင်ခဲ့သူများက မြန်မာတစ် နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး (ဒို့အရေး) ပြည်သူ့အသံနားထောင် ပေးရေး(ဒို့အရေး)၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ ဖော်ဆောင်ပေးရေး(ဒို့အရေး)၊ ပညာရေးလိုအပ်ချက်များ ဖြည့် ဆည်းပေးရေး(ဒို့အရေး)၊ ကုန်ဈေး နှုန်းမြင့်တက်မှုရပ်တန့်ရေး(ဒို့အ ရေး)၊ ပြည်သူ့ကျန်းမားရေးလိုအပ် ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးရေး(ဒို့အရေး)၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လမ်းများအပြည့်အဝရရှိရေး(ဒို့အ ရေး)၊ ဥပဒေအရေးယူမှုမျှတရေးဒို့ အရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရှိရေး(ဒို့အရေး)၊ စီ မံမှုအလွဲများပပျောက်ရေးစသော ဗီနိုင်းပါ စာသားမျာကိြုေ<ွကးကြော် ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှတာဝန်ရှိသူ ”သူတို့ကခွင့်ပြုချက်နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း သင့် တင့်တဲ့လုံခြုံရေးပေးခဲ့ပါတယ်” ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့သည့် ပြန်ကြားရေး နှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆက်ရေးရုံးအနီးတွင် သာထက်(ခ)နိုင်သူလတ်မှ တောင်းဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြွေးကြော်သံများကို ထပ်မံ ကြွေးကြော်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်ပြီးဆုံးသွား ကြောင်း သိရသည်။ ”မီးကလည်းစိတ်ညစ်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို လာလိုက် မလာလိုက်ဖြစ်နေတာ။ ပူလိုက်တာလည်းလွန်ရော။ ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်းတက်။ အင်မတန် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာပါ။ ဆရာဆရာမတွေကို နားလည်မှုပေးပါ။ ဘက်စုံပညာရေးလား။ အတန်းပညာရေးလား။ ကခုန်တီးမှုတ်နေတာနဲ့ ပညာရေးမြှင့်လို့ရသလား။ အားကစားကရော မပါရဘူးလား။ ဒါတွေကို မြင် အောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။အဲဒါ ကြောင့် ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်တဲ့အထဲမှာ ဝင်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရွှေပြည်သာ (၆)ရပ်ကွက်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။